Neymar oo u soo JAWAABAY tababaraha Liverpool ee Jurgen Klopp kaddib dhaleeceymihii uu dusha kaga tuuray – Gool FM
Neymar oo u soo JAWAABAY tababaraha Liverpool ee Jurgen Klopp kaddib dhaleeceymihii uu dusha kaga tuuray
Byare November 29, 2018
(Europe) 29 Nof 2018. Tababaraha Liverpool ayaa xalay si xun u eedeeyay xiddigaha PSG gaar ahaan Neymar kaddib guul daradii 2-1 ay kala soo kulmeen.
“Waxay ahady xariifnimo ay sameenayeen xiddigaha PSG gaar ahaan Neymar, laakiin xiddigo badan ayaa dhulka isku tuurayay sida inuu dhaawac halis ah gaaray,” Klopp oo Careysan ayaa sidaa yiri ciyaarta kaddib.
“Waxaad iska dhigeysaa sida qof dhimanay, daqiiqada xigtana waad istaageysaa waxay ahayd in Kaarka Jaalaha lagu siiyo. Waad sameyn kartaa midaa, ma ahan kubbada cagta inuu qof kasta dhulka isku tuuro.”.
Neymar oo ka jawaabaya Eedeymaha Jurgen Klopp ayaa yiri:
“100% taam ma ahayn laakiin kulan muhiim ah ayuu ahaa sidaa darteed dhaawac Iyo dhaawac la’aanba waxaan ku qasbanaa inaan halkaa joogo.”.
Rajada Liverpool ayaa iminka ku xiran inay 1-0 ama 2-0 uga adkaato Napoli kulanka ay bisha soo socota ku marti galin doonto garoonkeeda Anfield.
Neymar oo Xalay noqday BOQORKA Brazil....(Goolkii uu ka dhaliyay Liverpool oo Micno wayn sameeyay)
Jurgen Klopp oo BAXAR ku jira....(Tababaraha Liverpool oo la Ganaaxi karo kulanka Muhiimka ah ee Napoli)